Semalt - Ike nkwalite SEO
Semalt taa, bụ azịza zuru oke maka ịkwalite saịtị dị na igwe nchọta Google. Ọrụ anyị gụnyere ihe karịrị njikarịcha SEO site na ngwaọrụ na usoro ndị ama ama, anyị arụpụtala usoro nke ọhụụ na-enwetụbeghị ụdị maka mmejuputa ọganiihu nke ngo ọ bụla. N'ikwu ya, Semalt bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa dijitalụ nke nwere ọtụtụ iri afọ nke nkwalite SEO.
Ndị nwe ihe karịrị otu nde saịtị na-eji ọrụ anyị. Companylọ ọrụ ahụ na-eji nnukwu ndị ọkachamara eme ihe, na-ewetara ọpụrụiche dị iche iche: ndị ọkachamara SEO, ndị ọkachamara IT, ndị na-ahụ maka ire ere, ndị na-emepụta weebụ, ndị na-ede akwụkwọ, ndị na-agụ asụsụ, na ọbụna ndị isi animation. O doro anya na ihe niile dị njọ karịa, yabụ, ịdị mkpa nke azụmahịa gị na-adabere na nkwado na Semalt.
Gịnị bụ SEO
Iji ghọta ụkpụrụ ọrụ anyị, ịkwesịrị inwe echiche dị mkpa maka ihe ndị mejupụtara SEO na otu ha si arụ ọrụ. Ka anyị lelee ihe ndị dị elu. Nchọpụta Nchọpụta Ngịga Nhazi bụ usoro dị iche iche iji meziwanye ọnọdụ weebụsaịtị na ntanetị ọchụchọ site na isiokwu. Ebumnuche bụ isi nke nkwalite SEO bụ iji dọta ndị ahịa na saịtị ahụ site na ngwa ọchụchọ. Ọrụ mbu nke nkwalite ọchụchọ bụ ịhapụ ọdịnaya dị mma iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ rute n'ọnọdụ ndị dị elu na injin ọchụchọ ahụ.
Nlele SEO na-elekwasị anya n'ịba ụba okporo ụzọ saịtị, ya bụ, ịba ụba ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-eleta weebụsaịtị n'otu nkeji. Ọnọdụ saịtị dị na nchọta ọchụchọ ụfọdụ na arịrịọ ụfọdụ na ọnụọgụ nke okporo ụzọ na-anọchite anya ihu saịtị. Ngwa nchọta na - arụ ọrụ hiri nne na - arụ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eme njikarịcha nchọta site na ihe ndị dị na mpụga.
Ihe ndị dị n'ime na-arụ ọrụ ozugbo na weebụsaịtị onye nwe ya. Otingkwalite, na nke a, ọ pụtara ịkwalite njirimara ọrụ nke akụrụngwa ahụ, na-ese ihe ezi uche dị na ya, na-etinye njikọ n'ime, ịkwadebe ọdịnaya bara uru na nke bara uru.
Ihe ndị dị elu dị na mpụga bụ nkwalite saịtị site na ihe ndị ọzọ. Nzọụkwụ mbụ bụ ịnweta njikọ site na mpụga nke ga-eduga ibe weebụ gị.
Ihe ndị dị elu dị na mpụga bụ nkwalite saịtị site na ihe ndị ọzọ. Nzọụkwụ mbụ bụ ịnweta njikọ site na mpụga nke ga-eduga ibe weebụ gị. Ọrụ Semalt bụ iburu n'uche ihe niile ma chọpụta usoro omume dị mkpa site na ngwa ọrụ pụrụ iche. Ọzọkwa, mgbagwoju anya nke omume ndị a ga-eduga saịtị ahụ gaa n'ọkwá dị elu. Ndị chọrọ inwe ihe ịga nke ọma na azụmaahịa anaghị enwekarị nghọta SEO. Solutionzọ kachasị mma maka ha ga-eji usoro Semalt, arụmọrụ ya gosipụtara site na nsonaazụ pụtara ìhè.
Ihe Semalt na-eme
Isi ihe nke ọpụrụiche anyị gụnyere:
vidiyo nkwado maka azụmahịa gị;
Iji bulie saịtị, Semalt emepụtarala ụzọ pụrụ iche iji chọpụta ihe ga-esi na ha pụta tupu etinye ego na azụmahịa. Ahụmahụ ọjọọ na ụlọ ọrụ SEO na ihe ọmụma banyere ahịa nyere ụlọ ọrụ aka ka ọ bụrụ onye na-echepụta usoro SEO dị mma, dịka AutoSEO, FullSEO. Choputa uru nke mkpọsa a.
Na-achịkọta ụkpụrụ nke mkpọsa a, anyị nwere ike igosipụta isi uru ndị a ga-enweta site na ya:
na-ezo aka na webusaịl metụtara
A na- eme usoro AutoSEO dị ka ndị a: Ozugbo edebanyere aha, onye nyocha saịtị ga-eweta mkpesa dị mkpirikpi banyere ihe owuwu weebụsaịtị wee dabere na ụkpụrụ SEO. Ozi a, n'aka nke ya, ga - enyere aka melite ọnọdụ gị na Google. Onye njikwa gị, yana onye ndụmọdụ SEO, ga-eduzi nyocha nke weebụsaịtị gị nke ọma ma mee ndepụta nlele nke njehie ndị ekwesịrị idozi. Onye injinia SEO na-ahọpụta isiokwu dị mma iji mee ka okporo ụzọ weebụsaịtị dị ngwa.
Teknụzụ dị elu na-etinye njikọ regularlyntanetị mgbe niile na ọdịnaya dị mkpa n'ime ihe ntanetị dị iche iche. A rụpụtara ọmarịcha nsonaazụ site na ijikọ njikọ niile n'ime ọdịnaya a na-ekewaghị ekewa. Semalt nwere ihe ntanetị ibe dị elu 70,000 dị elu n'ọtụtụ isiokwu na-ekesa dabere na afọ ngalaba. Anyị na-enyocha njikọ na ọnọdụ ha mgbe niile na ngwa ọchụchọ. A na-etinyere otu njikọ njikọ njikọ ndị a:
Pasent 40 - njikọ arịlịka;
Pasent 50 - njikọ ndị a na-ahụkarị;
10 pasent - njikọta njirimara akara.
Mgbe ha nyesịrị ohere nkwado FTP ma ọ bụ CMS, ndị injin Semalt na-eme mgbanwe ndị akọwapụtara, nke egosiri na mkpesa webụsaịtị. Mgbanwe zuru ezu na weebụsaịtị gị n'ihi nkwenye nke ndị nyocha anyị na ndị ndụmọdụ SEO na-ekwe nkwa mgbasa ozi AutoSEO na-arụpụta ihe. Semalt na - eme nkwalite ọkwa ọ bụla kwa ụbọchị nwere ọtụtụ isiokwu ejirila mee ka ị mara banyere ọganihu mkpọsa SEO.
Onye isi Semalt na-enyocha usoro AutoSEO mgbe niile, na-enye onye nwe saịtị ahụ ozi-e ma ọ bụ nyocha nke ime. Ọ dị mkpa ịmara na ọnụahịa nkwalite maka ọrụ niile bụ $ 99 kwa ọnwa. N'oge ikpe ahụ, mkpọsa AutoSEO nke otu ọrụ na-akwụ $ 0.99.
A na-akọwa FullSEO dị ka usoro nke usoro njikarịcha weebụsaịtị na nke mpụga nke na-emepụta ihe ịga nke ọma na obere oge. Ọkachamara ga-arụ ma njikarịcha nke ime na nke mpụga, mezie njehie, wee dee ederede dịka nkọwa SEO si dị. N'ihi ya, azụmaahịa gị n'ịntanetị ga-aga n'ihu n'ihe dị ka ọnwa ole na ole. Site na mkpọsa nke FullSEO , ego a na-enweta na ego ga-abawanye nke ukwuu, yabụ nloghachi na itinye ego na-abịa karịa 700%.
Unmalite mkpọsa nke FullSEO ga - ahapụ gị iburu ụzọ n'ọkwa ahịa, na - atụkwasị ndị asọmpi gị anya. Usoro nkwalite weebụ a ga-eweta nsonaazụ bara uru nye gị ozugbo. Semalt'll ga - eme ka ị mata ndị ahịa nwere ike ịchọrọ gị.
Mgbe ndebanye aha, usoro nyocha anyị ga-enye mkpụmkpụ mkpesa banyere ihe owuwu nke weebụsaịtị na-agbaso ụkpụrụ injinia SEO. Ọzọkwa, onye njikwa gị, ya na onye ọkachamara SEO ga-eso, ga-eduzi nyocha nke saịtị gị zuru oke, nhazi ya, na-ekpebi usoro ọmụmụ Semantic.
Ezie na ha na-edebanye aha ahụhụ nke ekwesịrị idozigharị, onye nrụpụta SEO na-ekpebi isiokwu na-abawanye okporo ụzọ. Ebe nrụọrụ weebụ gị na-akwado njikarịcha nke ime ahụ maka ọkwa niile enyere na FullSEO. Mgbe ha nwetasịrị FTP na ngalaba nchịkwa nchịkwa nke CMS, ndị mmepe anyị na-eme mmezi edepụtara na nchịkọta gị na ebe nrụọrụ weebụ gị, na-echekwa mmezu nke usoro FullSEO gị.
Nmepụta nke mpụga: ndị ọkachamara SEO anyị na-amalite itinye njikọ na akụrụngwa ntanetị dị iche iche dabara adaba, nke dabara na ọdịnaya saịtị gị. A na - ekekọta njikọ ndị etinyere n'ime ọdịnaya a na-anaghị akwụ ụgwọ, yabụ, na - eme ka ị nweta nsonaazụ zuru oke. Thelọ ọrụ ahụ nwere ọnụọgụ dị oke mma-saịtị dị iche iche n'ofe akụ dị iche iche, bụ nke a na-ekewa ebumnuche n'ụzọ kwekọrọ n'ogo ogologo nke ngalaba ịdị adị na Google Trust Rank.
Njikọ njikọ rụrụ ọrụ oge niile ruru ruru:
Pasent 10 - njikọ akara njirimara.
Onye na-ahụ maka njikwa gị na-achịkwa mkpọsa gị dị ka akụkụ nke mmemme ahụ, na-ebuli ndepụta nke isi okwu akwalite, na-ebugara gị akụkọ, na-agwa uto mkpọsa SEO gị. Nchịkwa ahụ na-anọnyere gị ehihie na abalị.
Ọ bụrụ na ịkwụsị nkwalite SEO, a ga-ehichapụ backlinks niile, Google ga-ewepụ ha na ebe nchekwa data n'ime ọtụtụ ọnwa. Ọ bụ ezie na ọkwa ndị a rụzuru ga-agbadata n'otu oge, agbanyeghị, ha ga-adị oke karịa karịa tupu ịme SEO. Nkwalite SEO nke weebụsaịtị ọ bụla chọrọ usoro nke ọ bụla. A ga-ekenye ọnụahịa ga-eme mgbe ọkachamara SEO nyochachara saịtị gị iji nyere aka na onye njikwa Semalt.
Semalt na-eduzi nchịkọta Web. Ọ bụ usoro nyocha ahaziri ahazi na-ekpughe ohere ọhụrụ iji nyochaa ahịa. Ọ na - enyere ndị ọrụ aka soro ọnọdụ ndị asọmpi site na ịnye ozi azụmaahịa nyocha. Mgbe ị na-enyocha ọnọdụ weebụsaịtị, ọ na - enyere gị aka ịkọpụta ọhụụ nke ọnọdụ azụmahịa gị n'etiti ahịa. Ozi nyocha a na - eme ka o kwe omume ịkọwa nkọwa dị mkpa na ọrụ ị na - abịanụ ma jupụta saịtị gị na ọdịnaya dabere na isiokwu dị mma, njikọ ịzụta / azụmahịa, yana isiokwu dị mkpa.
Nchịkọta Semalt na-agwa gị eziokwu niile gbasara ọnọdụ ndị asọmpi gị na ahịa. Ojiji nke data a na-enyere gị aka ime nke ọma na njikarịcha ọchụchọ, na-eme mkpọsa azụmahịa gị. Ihe omuma a enwetara site na nyocha nke ahia na-ekpughe ohere ohuru maka ngwongwo ahia na oru, na-emeputa tradename na mpaghara di iche iche, na-eburu n'uche njirimara mpaghara niile.
Enwere ike ichoputa nchịkọta dika:
Kedu ka Semalt Analytics si arụ ọrụ
Ozugbo ị debanyere aha na weebụsaịtị anyị, ị na-amalite usoro maka ịnakọta data na-enweta ma nweta akụkọ zuru oke na-egosi ọnọdụ weebụsaịtị gị yana ọnọdụ nke ndị asọmpi gị. Akuko a tinyekwara ntuziaka banyere ihe owuwu webusaiti dika odi na iwu SEO.
Ndị nweela akaụntụ nwere ike tinye weebụsaịtị ọzọ na kansụl onwe onye, usoro ahụ ga-enyocha ya nke ọma. Mgbe a na-enyocha saịtị ahụ, sistemụ anyị na-enye ire ere mkpụrụokwu dabere na data ewepụtara na nyocha ahụ. Keywords ndị a ga-emetụta mmụba nke ndị na-abịa saịtị. Nwere ike itinye ma ọ bụ hichapụ isi okwu ndị ọzọ site na mmasị.
Anyị na-enyocha ọkwa weebụsaịtị wee soro ọganihu ha ruo elekere 24 kwa ụbọchị. Ọzọkwa, anyị na-anakọta ozi gbasara ndị asọmpi gị. Semalt na-emelite ọnọdụ weebụsaịtị gị kwa oge, si otú a na-enye gị ụzọ mbata iji lelee ọnọdụ weebụsaịtị na ntanetị oge ọ bụla ịchọrọ. Nwekwara ike iji Nrụọrụ Mmemme Ntanetị Mmemme (API). Nke a kachasị mma n'ihi na data ahụ na-emekọrịta na akpaghị aka, na-eme ka o kwe ndị ọrụ nwee ike ịhụ ozi kwalitere. Lelee data nyocha oge niile emelitere na isi mmalite ọ bụla ị họọrọ.
Nchịkwa ọnụahịa na- adabere na ọnụego ahọpụtara, lelee ụgwọ tarifu anyị n'okpuru:
Dịka akụkụ nke mmemme nkwalite SEO, ụlọ ọrụ anyị na-enye vidiyo pụrụ iche iji mee ka ndị ahịa tinye aka na azụmahịa gị. Onye Nkọwapụta Video na-enye ihe ngosipụta mara mma nke ọrụ ụlọ ọrụ gị nke na-egosi uru ndị bara uru na mmekorita gị.
Ndị ọkachamara na Semalt kwadebere nke ọma maka ọrụ kachasị sie ike. Ha niile nwere ike ijide mkparịta ụka n'asụsụ dị iche iche ma duzie ndụmọdụ bara uru. A na-egosi ọkwa arụmọrụ Semalt na ọtụtụ nyocha dị mma nke ndị ahịa anyị. Withrụ ọrụ na anyị, ohere nke ịga nke ọma dị nso na otu narị, na-emesịa, Semalt ga-abụ ebe isi mmalite nke ego anaghị akwụsị. Ọganiihu gị gosipụtara mmeri anyị!